Ny karatra fanomezana ebook dia zavatra vaovao avy any Amazon | Ireo mpamaky rehetra
Amazon dia mandefa ny famandrihana famandrihana Kindle Unlimited sy ny Ebook Gift Card Pilot
Manuel Ramirez | | Amazon Kindle, About us
Amin'ny faritra midadasika sy ilay iray izay tsy dia be loatra, toy ireo hitantsika any amin'ny tobin-tsolika, dia afaka mahita izany ianao karatra fanomezana ho an'ny fivarotana virtoaly fampiharana sy lalao video malaza toa ny Apple App Store sy Google Play Store. Fivarotana virtoaly ahafahanao mividy karazana atiny multimedia rehetra ary amin'ny alàlan'ny fanavotana ny kaody hita ao anaty karatra dia afaka mampitombo ny fifandanjana virtoaly izahay.
Amazon dia nandefa programa fanamoriana vaovao any amin'ny fanjakan'ny Washington izay mamela ny mpamaky hividy karatra fanomezana ho an'ny ebook manokana na famandrihana telo volana amin'ny Kindle Unlimited. Amin'izany no ahafahanao miditra amin'ny fividianana Karatra fanomezana 20 mpivarotra tsara indrindra amin'ny fotoana Amazon mba handefasana azy ireo mivantana avy amin'ny magazay virtoaly.
Amazon dia nanolotra karatra fanomezana hatrany izay ahafahan'ny mpampiasa mampiakatra ny fandanjalanjana ananany ao amin'ny kaontiny hampiasa azy io hividy karazan-javatra rehetra amin'ny tranokalan'izy ireo. Ny karatra fanomezana ebook zavatra vaovao tanteraka io ary manamarika dingana lehibe iray amin'ny fotoana voalohany misy ny lohateny niomerika manokana azo avotana eo noho eo.
Ny kaontera misy ireto boky ebook na boky nomerika ireto dia kely ary misy karazany marobe amin'izy ireo. Ny tapany ambony dia misy safidy roa hahazoana iray famandrihana telo sy enim-bolana amin'ny Kindle Unlimited. Ny kalitaon'ny Kindle Unlimited farafahakeliny dia ny fanomezana fidirana ebook maherin'ny 100.000 ary mamela ny mpampiasa hamaky araka izay tadiaviny amin'ny sarany isam-bolana.
Ity kiososy kely ity misy ny 20 mpivarotra be indrindra amin'izao fotoana izao Izy ireo dia afaka mampiditra lohatenin-tantara foronina na tsy foronina. Ny fahasamihafana lehibe dia misy amin'ny vidin'ny karatra fanomezana izay mampiakatra ny vidin'ny ebook raha ampitahaintsika amin'ny vidiny avy amin'ny magazay Kindle ihany. Ohatra, The Martian nataon'i Andy Wier, $ 14,99 ny karatra fanomezana fa ny boky Kindle kosa dia nidina hatramin'ny $ 8,99.
Ho hita izao raha hozaraina ity programa ity ho an'ny tsena bebe kokoa na raha hanomboka hampiditra azy ao aminy i Amazon magazay voalohany any Seattle. Iray amin'ireo fandraisana andraikitra hafa entin'i Amazon mba hanolorany ny atiny nomerika ho an'ireo mpampiasa miditra fivarotana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Ireo mpamaky rehetra » orinasa » Amazon Kindle » Amazon dia mandefa ny famandrihana famandrihana Kindle Unlimited sy ny Ebook Gift Card Pilot
Neil Gaiman dia mampiseho ny tranombokiny manokana